अचार खाएर ३१ जना बिरामी, तीन गम्भीर
२०७६ असोज २३ बिहिबार, सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११, पिपिरामा दशैँ भोजका लागि बनाइएको अचार खाँदा ३१ जना बिरामी परेका छन् । ... बाँकी अंश»
बढे अस्पतालमा भाइरलका बिरामी
२०७६ असोज १९ आइतबार, पर्वत । गर्मी मौसम सकिएर विस्तारै जाडो मौसम शुरु हुनै लाग्दा पर्वत जिल्लामा मौसम परिवर्तनका कारण हुने सिजनल भाइरलफ्लूबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या उच्च बनेको छ । ... बाँकी अंश»
कार्तिक १ गतेदेखि सुत्केरी भत्ता दिइने
२०७६ असोज १६ बिहिबार, यसैविच प्रतिष्ठानले आफुले दिने ओपिडि र इमर्जेन्सी शुल्कमा हेरफेर गरेको छ । यसअघि ओपिडि शुल्क २५ र इमरजेन्सि शुल्क ३० लिदै आएकोमा कार्तिक १ गतेदेखी ओपिडि शुल्कमा ६० र इमरजेन्सि शुल्कमा ८० कायम गरेको छ । ... बाँकी अंश»
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनेको संख्या २ लाख २५ हजार नाघ्यो
२०७६ असोज १२ आइतबार, अछाम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनेको संख्या २ लाख २५ हजार ३ सय ९७ पुगेको छ । यस प्रदेशका ७ जिल्लामा लागु भएको बिमा कार्यक्रम मार्फत उक्त संख्या पुगेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक जनक साँउदले बताए । ... बाँकी अंश»
चिकित्सक, औषधि र कर्मचारी नभएपछि बन्द हुँदै कलैया अस्पताल
२०७६ असोज ११ शनिबार, बारा । चिकित्सक र औषधीको अभावमा बाराको कलैयास्थित जिल्ला अस्पतालको बहिरंग सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । ... बाँकी अंश»
मृगौला पिडित देवी पल्ली बचाउन स्वदेश तथा विदेशमा आर्थिक संकलन
२०७६ असोज ११ शनिबार, गुल्मी। गुल्मी मुसिकोटकी मृगौला पिडित देवी पल्ली बचाउ अभियानको लागि स्वदेश तथा विदेशमा आर्थिक सहयोग संकलन जुट्दै गएको छ । मुसिकोट नगरपालिका ४ बडागाँउ डाथोक निवासी २२ बर्षीय देवी पल्लीको दुवै मृगौलाबाट पिडितको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुको सक्रियतामा विगत १ महिनादेखि देवी पल्ली बचाउ अभियान मार्फत सहयोग संकलन अभियान सञ्चालन गरिएको ... बाँकी अंश»
अप्रेशन गर्दा सुत्केरीको मृत्यु
२०७६ असोज ९ बिहिबार, पाल्पा । पाल्पामा सुत्केरी हुन आएकी महिलाको शल्यक्रिया गर्दा मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा पाल्पा रम्भा गाउँपालिका–४ हुमिन लोरेङगका २४ वर्षीया विपीन्द्र सूयवंशी छिन् । ... बाँकी अंश»
२०७६ असोज ९ बिहिबार, काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालले गैरकानुनी रुपमा स्टार्फ नर्सहरु राख्दैछ । बिहीबार (असोज ९ गते) २५ स्टाफ नर्स राख्ने तयारीमा अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी लागेका छन् । ... बाँकी अंश»
राकममा शिक्षण अस्पताल खोल्न सरकारसंग कांग्रेस सहमहामन्त्री डा महतको माग
२०७६ असोज ८ बुधबार, दैलेख । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले दैलेखको राकममा शिक्षण अस्पताल बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको संख्या सात पुग्यो
२०७६ असोज ६ सोमबार, रुपन्देही । डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट रुपन्देहीको सैनामैनामा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन डेङ्गुबाट, जनमानसमा ज्ञानको कमी
२०७६ असोज ३ शुक्रबार, काठमाडौँ । हिमाल, पहाड र तराई भिन्नभिन्न हावापानी र मौसम भएका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गु रोग सार्ने ‘एडिस एजेप्टी’ र ‘एडिस एल्बोपिक्टस’ पोथी जातका लामखुट्टे पुगेको पाइएको छ । ... बाँकी अंश»
डेङ्गुको महामारी भन्दै भ्रममा नपर्न चिकित्सकको आग्रह
२०७६ असोज २ बिहिबार, डा. बास्तोलाले डेङ्गुले टोकेको चारदेखि दश दिनमा लक्षण देखापर्ने, १० हजार जनालाई टोकेमा १ हजारमा डेङ्गु हुने र सातदेखि दश दिनसम्म यसका लक्षण शरिरमा रहने, १ हजारमा पनि ५ सयलाई फ्लु हुने, ५ सयलाई डेङ्गु हुने जानकारी दिए । उनले अस्पतालमा डेङ्गु रोगीमात्र नभएर स्क्रब–टाइफसका रोगी देखिएको बताए । उनले डेङ्गु रोगका कारण बिरामीमा रक्तश्राव हुने तथा जटिल लक्षण देखा परेकोलाई मात्र अस्पताल भर्ना गर्ने गरेको सुनाए । ... बाँकी अंश»
गाउँमा सबै विरामी, भाइरलले तीन दिनदेखि विद्यालय बन्द
२०७६ असोज २ बिहिबार, जाजरकोट । भाइरलका कारण जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका– ८ मङ्सिरीस्थित हिमालय प्राथमिक विद्यालय बन्द भएको छ । ... बाँकी अंश»
१२ लाख महिला गर्भवती भएकामा पाँच लाख ३९ हजार गर्भ अनिच्छित
२०७६ असोज १ बुधबार, काठमाडौँँ । करीब छ दशकअघिदेखि नेपालमा व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयनमा आएको परिवार योजना (नियोजन) का कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । ... बाँकी अंश»
अस्पतालभित्र रहेको अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट, दुई जना घाइते
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, काठमाडौँ । थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको हाताभित्र रहेको अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट भएको छ । उक्त विस्फोटनमा परी दुई प्राविधिक घाइते भएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, चितवन । जिल्लाका अस्पतालहरुमा साउन महिनायता उपचार गर्न आएका दुई हजार ४६ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ । छ हजार ६३९ जनाको नमूना परीक्षण गरिएकामा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिएको हो । ... बाँकी अंश»
मर्करीयुक्त उपकरण तथा डेन्टल अमल्गमको प्रयोगमा प्रतिबन्ध
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, काठमाडौँ । सरकारले मर्करीयुक्त उपकरण तथा डेन्टल अमल्गमको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ... बाँकी अंश»
स्क्रव टाइफसको सङ्क्रमणबाट ७४ बिरामी
२०७६ भदौ ३१ मंगलबार, कञ्चनपुर । मुसामा लाग्ने किर्नाजस्तो देखिने ‘माइट’ को टोकाइबाट मानिसमा सर्ने स्क्रब टाइफस रोगबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७४ बिरामी देखापरेका छन् । ... बाँकी अंश»
मुस्ताङको मार्फामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
२०७६ भदौ २८ शनिबार, मुस्ताङ। गण्डकी आवासीय माध्यामिक विद्यालय पोखराका पूर्व विद्यार्थीहरुले मुस्ताङको मार्फामा आफ्नै खर्चमा शनिबार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका छन्। शिविरमा विभिन्न रोगका करिब एक हजार जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुका साथै निःशुल्क औषधिसमेत वितरण गरिएको छ। गण्डकीका पूर्व विद्यार्थीहरुको संगठन एग्बोस काठमाण्डु र नर्थ अमेरिकाको संयुक्त आयोजनामा शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। ... बाँकी अंश»
‘डेङ्गुका लागि आत्मबल उच्च राखे जितिन्छ’
२०७६ भदौ २८ शनिबार, चितवन। डेङ्गु सङ्क्रमित बिरामीले आत्मबल उच्च बनाएमा रोग जित्न सकिने बताएका छन् । यहाँको पुष्पाञ्जलि अस्पतालले आज आयोजना गरेको ‘डेङ्गु नियन्त्रणमा, डेङ्गु सङ्क्रमित बिरामीको’ भूमिका विषयक सचेतना कार्यक्रममा उनीहरुले आफूले आफूलाई कमजोर बनाउन नहुने बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»